Rain Testimony Set For Next Month - video.phpmyanmar.com
Rain Testimony Set For Next Month
Posted By - Ko Ko - August 7, 2012
အဆိုတော် မင်းသား Rain ဟာ နောက်လ (Sept 2012) တွင်၊ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုချက် ပေးဖို့ ဆင်ခေါ် ခြင်းခံထား ရပါတယ်။ ၄င်းဆင့် ခေါ်ချက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ငွေအလွဲ သုံးစား လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး တရားစွဲ ခံထား ရတဲ့ အမှု တစ်ခု အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Rain နဲ့ သူ့ရဲ့ အပေါင်းပါ များဟာ နည်းလမ်း ပေါင်းစုံပြီး၊ won 4.6 billion won (US$4 million) အလွဲ သုံစား ပြုခဲ့ ကြပါတယ် ဆိုပြီး၊ လုပ်ငန်း ရှင်တစ်ဦး က တရား စွဲဆို ခဲ့ပါတယ်။ Dec 2012 မှာ တရားရုံးက Rain ကို အနိုင် ပေးပြီး တရားသေ လွှတ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
အခု ဆင့်ခေါ် ခြင်းကတော့ အဆိုပါ လုပ်ငန်းရှင် ရဲ့ မမှန် မကန် တရား စွဲဆို ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပရိသတ် အလယ်မှာ မည်မျှ မျက်နှာ ပျက်ခဲ့ ရတယ် ဆိုတာကို တရားဝင် ရှင်းပြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Rain ဟာ လောလောဆယ် မဝင် မနေရ ၂ နှစ် စစ်မှုထမ်း ဥပဒေ အရ၊ စစ်မှုထမ်း နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source Link : Rain Testimony Set For Next Month
Summary - Singer Rain will be summoned next month to stand asawitness to clear his name inatwo-year-old embezzlement case. The Seoul Central District Court on Tuesday requested the presence of the Hallyu star to testify in his defamation suit against an entrepreneur who falsely claimed Rain swindled his company. In the original trial, Rain was accused of embezzling 4.6 billion won ($4 million) from an apparel company affiliated with J-Tune Entertainment agency at the time.
End of Article - Rain Testimony Set For Next Month
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/528/rain-testimony-set-for-next-month
Rendering time 0.0445 sec *
19c13fa004ce0f2dacb0ddae706798c2 - January 17, 2018 - 2:19:56 pm